Jananinepal.comस्वास्थ/जीवनशैली Archives - Page2of 18 - Jananinepal.com
यस्तो छ सेक्स पावर कसरी बढाउने तरिका
यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई सेक्स क्षमता बढाउने […]
पहिलो पटकको यौन सम्पर्क गर्दा ध्यान दिनु पर्ने टिप्स
पहिलो पटकको यौन सम्पर्कका बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ । जिज्ञासासँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् र मानिसहरुले धेरै प्रकारको गलत जानकारी पनि दिने गर्दछन् । यस्तै कौतुहललाई समाप्त गर्नका लागि पहिलो पटकको सेक्सको बारेमा हामी केहि जान्कारी दिन्छौँ । – यदि तपाईं आफ्नो पहिलो सेक्स […]
यौंन शक्ति बढाउनका लागि यि हुन घरेलु उपाय
तपाईको यौन जीवनमा धेरै समस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले समस्याहरु त्यसै लुकाएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नियमित यौन क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ सेक्स स्वास्थ्यको दर्पण हो । यौंन शक्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउने गर्नुभएको छ, होला । […]
कोरोनाबाट इटालीमा एकैदिन ३४६ को मृत्यु, ज्यान जानेको संख्या २५०० नाघ्यो !
५ चैत, काठमाडौं । इटलीमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या २ हजार ५ सय नाघेको छ । इटलीमा बितेको २४ घण्टामा थप ३ सय ४६ कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । यो एकै दिन भएको अहिलेसम्मकै उच्च मृत्यु हो । योसँगै इटलीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार ५ सय ३ पुगेको […]
प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार
विश्वभर कोरोना भाइरसकोभिड १९० महामारी फैलिएरहेका बेला नेपालमा सतर्कताका लागि तयारी कमजोर देखिएको छ। नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहे पनि पूर्वाधारलगायतका तयारी सुस्त छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने संक्रमणको सम्भावित स्वरूप, परीक्षण, निदानलगायतमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू चीन, भारत, युरोप, अमेरिकाजस्ता सम्पन्न देशबाट स्वास्थ्य जाँचका कयौं प्रक्रिया पार गरेर पर्यटक […]
नेपालमा बर्से्नि ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल, पूर्वसचेतना नै निदानको उपाय
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका अनुसार नेपालमा १० जनाको मिर्गौला जाँच गर्दा एक जनामा मिर्गौलाको समस्या हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा करिब ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौलाको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । यद्यपि, सरकारले मिर्गौला फेल भएका नागरिकको […]
प्रत्यारोपणमा नेपालको फेरि अर्को सफलता
भक्तपुर, शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ५ औ पटक सफल कलेजो प्रत्यारोण भएको छ । गत पौष २८ गते सर्लाहिका ६५ वर्षिय बाबु योगेन्द्र महतो लाई ३५ वर्षिय छोरो पंकज महतोले कलेजो दान दिएका दिए । कलेजो प्रत्यारोणमा केन्द्रका प्रत्यारोपणविद् डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सहित ३० जना चिकित्सक र नर्स संलग्न रहेको केन्द्रल एक विज्ञप्ति निकालि […]
समय समयमा प्रोष्टेट परीक्षण गर्न विज्ञहरूको सुझाव
समय समयमा प्रोष्टेट परीक्षण गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उमेर छिप्पिदै जाँदा पुरुषमा देखापर्ने यो रोग समयमै परीक्षण गर्न सके दीर्घकालीन समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । प्रोष्टेट पुरुषमा जन्मदेखि नै हुने अङ्ग हो । पिसाब नली र पिसाबथैलीको बीचमा प्रोष्टेट हुन्छ । उमेरअनुसार प्रोष्टेट बढ्दै जाने र एक्काइस।बाइस बर्षमा वर्षमा २१÷२२ ग्रामकै प्रोष्टेट हुने […]
बढ्दैछ डेंगोको बिरामी
चितवन- डेंगुको संक्रमण देशभर फैलिनेक्रम बढे पनि समयमा नै उपचार गरिए सहज रूपमा निको हुने चिकित्सकले बताएका छन् । डेंगुको प्रकोप एक्कासि बढ्दा सर्वसाधरणमा अत्यधिक त्रास देखिन थालेको छ तर समयमा नै उपचार गरे रोगको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा बच्न सकिने भएकाले त्रास नमान्न र डेंगुको लक्षण देखिना साथ समयमा नै अस्पताल गएर उपचार गर्न चिकित्सकको […]
डेङ्गु रोग एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । पोथी जातको सो लामखुट्टेको टोकाइको भाइरसबाट सङ्क्रमित भई रोग सर्दछ । विसं २०७६ को वैशाखदेखि हालसम्म छ हजारभन्दा बढी बिरामी भइसकेका जनाइएको छ । प्रायः सो जातको लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्दछ । वर्षात्को समयमा शुरु भएपछि सो रोग बढी […]